Galmudug oo aan weli ka hadlin Muddo kordhinta Golaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Galmudug oo aan weli ka hadlin Muddo kordhinta Golaha Shacabka
Dowlad Goboleedka kaliya ee aan weli ka hadlin Muddo kordhinta Golaha Shacabka uu u sameeyay hay'adaha dolwadda ayaa ah Dowlad Goboleedka Galmudug.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ah maamulka kaliya ee aan weli ka hadlin Muddo kordhinta Golaha Shacabku uu u sameeyay hay'adaha dolwadda, horay ayuu u caddeeyay mowqifkiisa ku aaddan Muddo kororsiga Madaxweyne Qoorqoor isagoo la hadlayay Taleefishinka Somali Cable.
Axmed Qoor-Qoor hoggaamiyah Galmudug oo markiisii hore ahaa Ergo uu u dirsaday Madaxweyne Farmaajo dowlad goboleedka Galmudug ayaa markii uu xilka qabtay wixii ka dambeeyay u hoggaansanaa awaamiirta iyo go'aanada Madaxweyne Farmaajo, marna kama uusan hor imaan halkii sano ee uu Galmudug hoggaaminayay.
Wareysi uu siiyay Taleefishin maxalli ah ayuu ka dhawaajiyay go'aankiisa ku aaddan muddo kordhinta, waxa uuna gabi ahaanba meesha ka saaray wax la yiraahdo muddo kordhin, dalkana inuu doorasho aadayo ayuu sheegay, wuxuu si kulul ula hadlay dadka doonaya in waqtiga la kororsado, isagoo aragtidiisa cabbiraya ayuu meesha ka saaray in qorshahaasi uu socdo.
Qoor-Qoor u muuqda inuu ka hor yimid Farmaajo ayaa sidoo kale wareysigaas ku sheegay in Madaxweyne Farmaajo haddii uu ku dhawaaqo inuu musharax yahay uu ula mid yahay musharaxiinta kale, hadalkaasi oo ay aad uga carootay Villa Soomaaliya, waxaana soo if-baxay kala shaki udhaxeeya Qoorqoor iyo Farmaajo.
Waraaq ay ku qoran yihiin dowlad goboleedyada saddexda ah iyo gobolka Benaadir oo lagu taageerayo muddo kororsiga ayaa lagu baahiyay warbaahinta dowladda, waxaana waraaqdaasi aqbalay labada maamul goboleed ee kala ah Hirshabeelle iyo KGS iyo sidoo kale maamulka gobolka Benaadir.
Balse ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin mowqifka dowlad goboleedka Galmudug, waana maamulka kaliya ee ka aamusan arrinta muddo kororsiga, iyadoo dhinaca kale labada maamul ee soo harayna ay diideen muddo kororsiga.